नेपाल आज | प्रधानमन्त्रीको करोडौंको उपचार खर्च कसले बेहोर्दै छ ? ( भिडियोसहित)
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपचारका लागि फेरि सिंगापुर जाँदै हुनुहुन्छ । यसअघि साउन १८ गते सिंगापुर जाँदै गर्दा उहाँको सचिवालयले उपचार खर्च प्रधानमन्त्री स्वयं आफैले बेहोर्ने जनाएको थियो । के उपचारको सम्पूर्ण खर्च प्रधानमन्त्री स्वयंले बेहोर्दै हुनुहुन्छ त ?
नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवडा भन्छन्, ‘ प्रधानमन्त्रीले आफनो खर्च आफै गर्छु भन्नु राम्रो हो, तर उनले यति ठूलो खर्च कसरी जुटाइरहेका छन् ? उनले यसअघि नै पटक–पटक उपचारका नाममा करोडौं बुझिसकेका छन् । बिभिन्न देशको भ्रमणकाक्रममा २ अर्ब ५० करोड भन्दा बढी खर्च भएको छ । यो सबै उनले एक्लै बेहोर्ने हो ? उनको आयश्रोतले यो सबै धान्छ ? कि कोही दाता छ ? दाता छ भने त्यो को हो, नेपाली जनताले थाहा पाउनुपर्छ । ’
‘प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य निकै गम्भीर रहेको सुनिन्छ, तर कसैलाई जानकारी गराइएको छैन । एउटा लोकतान्त्रिक सरकारले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाको जानकारी त लुकाउँछ भने बाँकी कुरा के गर्छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । निर्मला हत्याकाण्ड, वाइडबडी, फोर जी, मेलम्ची लगायतका अपराध तथा भ्रष्टाचारका काण्डमा कति सूचना लुकायो भन्ने कुरा अनुमान समेत गर्न सकिदैन । यो जनताको सरकार होइन, यो तस्कर, अपराधी र भ्रष्टहरुको सरकार हो । ’ नेता खतिवडाले भने ।
नेता खतिवडाका अनुसार अहिलेको सरकार भारत परस्त छ । प्रधानमन्त्री ओली भारतको स्वार्थमा काम गरिरहेका छन् । उनले गरेका जति पनि निर्णय छन् सबै भारतको हीतमा छन् । भारतले नाकाबन्दी गरेकाबेला उनले देखाएको राष्ट्रवाद खोक्रो थियो भन्ने पुष्टि भैसकेको छ । उनी नाङ्गिएका छन् ।
अहिले नेपालले जम्मु काश्मिरका सन्दर्भमा स्पष्ट जवाफ दिन नसक्नुको कारण अपरिपक्व कुटनीतिको उदाहरण हो ।
भारत रिसाइहाल्छ कि भनेर नेपाल बोलेको देखिन्न । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले क्षेत्रिय शान्तिको चिन्ता उठाएका छन् तर भारत सरकारले जम्मु कश्मिरका विषयमा लिएको निर्णय ठीक हो वा बेठिक भन्न सकेनन् । उल्टो उनले विषयवस्तुलाई बङग्याएर कांग्रेस नेता प्रदीप गिरीको आलोचना गरे । यो उनको बालहठ हो । प्रधानमन्त्री ओली हुन वा ज्ञवाली सबै कुटनीतिक हिसाबमा पूर्ण असफल देखिए ।
यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको बेलायत र फ्रान्सको भ्रमणपनि असफल भयो । बेलायतमा राजीनामा दिइसकेकी प्रधानमन्त्री टेरिजा मेलाई भेट्नु कुनै उपलब्धी होइन । फ्रान्सका राष्ट्रपतिले त ओलीलाई भेट नै दिएनन् । अझै विदेश भ्रमण सफल भयो भन्न छोडेका छैनन । कतिसम्म लाजमर्दो !
अहिले भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकर नेपाल आउँदैछन्, सरकारका मन्त्रीहरुको सातोपुत्लो गएको छ । जम्मु काश्मिरका विषयमा कुरा नगर्ने भनेर मन्त्री ज्ञवाली पहिलै बोलिसके । सार्क अध्यक्ष राष्ट्र भएपछि केही भूमिका खेल्ने आँट किन छैन ?
हिजो जयशंकर विदेश सचिव हुँदा नेपालले भोग्नु परेको नाकाबन्दी, नेपाल भारत सीमा, १९५० को सन्धी, लिपुलेक, कोशी गण्डकी सम्झौता, प्रबुद्ध समूहले तयार पारेको रिपोर्ट, नेपालको तराई क्षेत्रको डुवान, आयात निर्यात, फलफुल तथा तरकारीका विषादी लगायतका सबै विषय नेपाल सरकारले उठाउन सक्नुपर्छ । तर, नेपालको तयारी केही पनि देखिदैन ।
वास्तवमा नेपाल जयशंकर होइन, प्रधानमन्त्री मोदी आउनुपर्ने हो । नेपालका प्रधानमन्त्री ओली र मोदीबीच प्रगाढ सम्बन्ध छ, तैपनि दोस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्री भएपछि मोदी नआउनुको कारण के हो ?
जहाँसम्म सरकारको कुरा छ यो कुनैपनि बेला आफनै कारणले संकटमा पर्न सक्छ । प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच चरम विश्वासको संकट छ । एक किसिमले भन्ने हो भने उनीहरुबीच हात हालाहालकै स्थिति छ । ओली पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री आफै हुँ भन्ने दाहाल आलोपालो अनुसार आफू हुनुपर्छ भन्ने । यो अवस्थाले नेकपा पार्टी र सरकार कुनैपनि बेला दुर्घटनामा पर्ने स्थिति छ । अझ बिभाग गठनकाक्रममा देखिएको ध्रवीकरणले बिभाजको अवस्था अझ बलियो बनाएको छ ।
नेपाली कांग्रेस अहिले संगठन सुदृढीकरणमा लागेको छ । अब कांग्रेसलाई आगामी चुनावमा कसरी जिताउने भन्ने मुल मन्त्रमा केन्द्रीत भएर देशभर प्रशिक्षण सुरु गरिएको छ । शीर्ष नेताहरुबीच विवाद साँघुरिदै गएको छ । आउँदो महाधिवेशनपछि कांग्रेसले संविधानका केही विवादित अन्तर्वस्तुमा पुनर्विचार गर्न सक्ने सम्भावना छ ।